माओवादीको बहिर्गमनपछि के गर्लान् ओलीले ? यी चार विकल्प बाँकी छन् - Himalayan Kangaroo
माओवादीको बहिर्गमनपछि के गर्लान् ओलीले ? यी चार विकल्प बाँकी छन्
Posted by Himalayan Kangaroo | २८ असार २०७३, मंगलवार १५:४३ |
काठमाडौं । वर्तमान सरकारको प्रमुख सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेसँगै तत्काल सरकारको विकल्प र आगामी सत्तासमीकरणबारेको बहस सुरु भएको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । योसँगै अब प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्न सक्ने कदम वा राजनीतिक विकल्पहरुका बारेमा विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेका छन् ।
अब ओलीका सामू खास चार वटा विकल्प बाँकी छन् ।
एक : ओलीले आफ्नै नेतृत्वको पक्षमा संसदको बहुमत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारसँग अब २ सय ५३ जना सांसदको समर्थन छ । सरकारलाई कायम राख्न ओलीलाई २ सय ९८ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । जुन मत ल्याउँन ओली सफल भए यो सरकार जोगिनेछ ।
दुई : माओवादीले ओलीको अविश्वास प्रस्तावमा बहुमत ल्याउँनु पर्नेछ । माओवादीले कांग्रेसको पूर्ण साथ र अरु साना राजनीतिक दलको समर्थन पाउन सक्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर वर्तमान सरकार ढाल्न सक्छ । अहिले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउँन माओवादीलाई सजिलो भए पनि कांग्रेसको कुटिल राजनीतिले सबैभन्दा प्रभाव पार्ने निश्चित छ । किनकि, माओवादीले कांग्रेसकै समर्थनमा वर्तमान सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिएको भने पनि कांग्रेसले आफ्नो कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
तीन : ओलीले राजीनामा दिनुपर्नेछ । सरकार परिवर्तनका लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु भए पनि ओली त्यो मनस्थितिमा छैनन् । किनकि, ओली अझै पनि राजनीतिक चलखेल गरेर माओवादीले ल्याउँने अविश्वासको प्रस्तावलाई नै अल्पमतमा पार्ने सोचमा भएको एमाले नेताहरुले वताउँदै आएका छन् ।
चार : प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्नुहुनेछ । तर यसअघि पनि सरकार अप्ठ्यारोमा परेका बेला एमालेका नेताहरुले नै संसद विघटन गर्नु घातक हुने बताएका थिए । त्यसैले यो सम्भावना कम छ । संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्दा अस्थिरिता निम्त्याएको आरोपमा आलोचित हुने डर एमालेलाई छ ।
यसबाहेक पनि अरु थुप्रै राजनीतिक विकल्पहरु छन् । रातारात परिवर्तन हुने नेपालका राजनीतिक दलको निर्णयले स्थिति कुन मोडमा पुगेर अवतरण हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन भए पनि ‘राजनीतिक सहमति’का आधारमा ओली नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउँने सम्भावना पनि बलियो छ । राजनीतिक वृत्तमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगेसले ओली नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन गरेर अघि बढ्ने आँकलन समेत गरिएको छ ।
Previousमाओवादी कदमको एक भएर सामना गर्न सत्तारुढ दल तयार
Nextनेपालमा सरकार परिवर्तनबारे चीन केही नबोल्ने
कपिलवस्तुमा फेरि अनिश्चितकालिन कर्फ्यू
५ कार्तिक २०७५, सोमबार ११:०१
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार,डिस्चार्जको टुङ्गो लाग्न बाँकी
१६ कार्तिक २०७५, शुक्रबार ०१:४८